Kitra – Fanomanan-tena: tsy miakatra kianja ireo mpilalaon’ny Barea sasany any ivelany | NewsMada
Kitra – Fanomanan-tena: tsy miakatra kianja ireo mpilalaon’ny Barea sasany any ivelany
Mampametra-panontaniana ny rehetra, amin’izao fotoana izao, ny fanomanan’ny Barea de Madagascar, ny lalao amin’i Sénegal sy ny «Can 2019». Ankoatra izay, tsy dia miakatra kianja firy ireo mpila ravinahitra malagasy.
Mangina tanteraka ny amin’ny Barea de Madagascar, taorian’ny fahazoana ny tapakila hiatrehana ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 2019), taranja baolina kitra. Tsy heno mihitsy mantsy, ny fanomanana na izay ho fiatrehana lalao ara-pirahalahiana, ho fiatrehana an’i Senegal, afaka roa volana sy ny Can, amin’ny volana jona.
Ankoatra izay, tsy mahazo lalao firy intsony any amin’ny ekipa misy azy ireo tsirairay avy any Frantsa, ireo mpila ravinahitra malagasy na ny “expatriés”, mandrafitra ny Barea de Madagascar. Zara fa miakatra kianja ny ankamaroany, indrindra fa ireo izay milalao ao amin’ny «ligue 1».
Anisan’ireo voan’izany, i Jeremy Morel, ao amin’ny Olympique Lyonnais. Tato ho ato, tsy nahazo fihaonana intsony ny lehilahy. Eo koa i Romain Metanire sy i Fontaine, izay samy milalao ao amin’ny Stade Reims. Efa ela ry zalahy, no tsy tafiditra intsony tao anatin’ireo 18 soratana ao anaty “feuille de match”.
Mety hisy fiantraikany eo amin’ny toe-batany izany, tsy fahampian-dalao izany, indrindra fa eo amin’ireo lalao miandry ny Barea de Madagascar, atsy ho atsy.
Vokany, fantatra fa niala ary nifindra klioba i Metanire. Nanaiky ny handehanany hilalao any amin’ny ekipan’ny Minnesota FC any Etazonia, ny Olympique Lyonnais. Ao anatin’ny fotoana fifindrana klioba rahateo, amin’izao fotoana izao. Tsy fantatra aloha, na ohatrinona ny tentim-bidin’ity fifindran-toerany, ity sy ny faharetany. Herintaona, azo avaozina aloha ny fifanarahana, amin’ity filalaovany any Etazonia, ity.
Ankoatra izay, tsiahivina fa efa nanambara i Nicolas Dupuis, fa tsy maintsy haka mpilalao lohalaharana sy mpiandry tsatoby izy, hanatevina ny Barea de Madagascar, amin’io (Can 2019), io.